Izaphulelo ezizodwa kubasebenzisi beNkulumbuso yeAmazon | Iindaba zeGajethi
Izaphulelo ezizodwa kubasebenzisi beNkulumbuso yeAmazon
Njengoko uyazi kakuhle, iAmazon ilungiselela isixa esihle se Izithembiso eziza kufika ngokusesikweni ngoJulayi 10 kwaye njengesiqhelo kwiActualidad Gadget siza kukwazisa ngeendaba ezimnandi kakhulu. DUkusukela namhlanje nge-5 kaJulayi kude kube ngumhla we-10, i-Amazon.com iququzelele izaphulelo kunye nokunyusa okukhethekileyo kukhetho lweemveliso ukuba zamkelwe.
NgoLwesibini olandelayo, nge-11 kaJulayi, kubhiyozelwa uSuku lweNkulumbuso lwesithathu, kunye nokunikezelwa okukhethekileyo kubathengi beAmazon Prime kumazwe ali-13. Entsha kulo nyaka, abathengi baya kuba nakho ukonwabela iiyure ezingama-30 zokuthenga. Okwangoku, sifuna ukukumangaza nge Izaphulelo ezikhethekileyo kubasebenzisi beNkulumbuso yeAmazon eziza kuhlala ukusukela namhlanje kude kube nguJulayi 10.
Siqala ngabasebenzisi abaqhelekileyo, kwaye siya kufumana I-30% isaphulelo kwimemori nakwimveliso zokugcina ezinje ngee-USB kunye nokuqhuba kanzima kwayo nayiphi na ifomathi. Ungajonga izibonelelo ezizayo kwi LE LINK.
Siza kuba nesandi, Iintloko zeSony zemidlalo zifumana isaphulelo esingaphezulu kwama-30%, njengala ma-headphone akwa-Sony onokuwathenga kule NXULUMANOI-Sony MDRAS210B.AE I-Ear-Grip Sports Earbuds (Splash Resistant), emnyama. Ayizizo zodwa izibonelelo ezivela kwaSony, kuba nazo ziyongezwa Walkman nazo zonke iintlobo zeekhamera.
1 Izaphulelo ezingakumbi kwi-Amazon Prime countdown
2 Izibonelelo ezizodwa zikwinkonzo yeAmazon Prime
Izaphulelo ezingakumbi kwi-Amazon Prime countdown
Abona badlali badlala i-20% isaphulelo kwikhadi lemizobo lika-Asus DUAL, malunga ne-30% isaphulelo kwi ukhetho lweekhamera zeNikon kunye nokukhethwa kweelensi zeSigma, Ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-30 kwiibhodi ze-MSI zebhodi yomama.
Izibonelelo ezizodwa zikwinkonzo yeAmazon Prime
Abathengi beAmazon Prime ababukela isiqephu okanye imovie kwiVidiyo yeNkulumbuso Phakathi kwe-5 ne-11 kaJulayi ka-2017 uyakufumana ikhowudi yokwazisa ye-5 euro inokuhlawulelwa kwi-Amazon.com ngokuthenga kwi-35 Euro. Okokugqibela, abathengi beAmazon Prime abangakhange bazame inkonzo yokuhambisa ngokukhawuleza, baya kuba nakho ukugcina ukuya kuthi ga kwi-20 euros ngokuthenga kwe-Prime Now, bexhamla kwisaphulelo se- € 10 kuthengiso lwabo lokuqala ngaphezulu kwe- € 50 phakathi kwe-5 kunye Julayi 10.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaphulelo ezizodwa kubasebenzisi beNkulumbuso yeAmazon
UXiaomi ufuna ukwandisa kumazwe aphesheya kunye namaqabane eNokia
Thatha inxaxheba kwisifundo sethu ekusebenziseni ngokufanelekileyo i-smartphone